Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Waa Maxay Macnaha Dhibcaha Dhibcaha Dhibcaha?
Muwaadin kasta oo Mareykan ah oo isticmaalay amaahda waxaa dhibco u qoondeeyay Fair Isaac Corporation, ama FICO. Mid ka mid ah qeybaha ku jira baaxadeeda waxaa loo yaqaanaa “credit credit”. Waxay ka kooban tahay xadka 580-669. Haddii aad eegto burburka, waxaad arki doontaa in heerkani uu ka hooseeyo “sumcad wanaagsan”. Haa, wadarta caddaaladdu ma aha natiijada ugu fiican. Maxay macaamiishu u helaan, sideese kor ugu qaadi kartaa heerkooda?
Dhibcahaagu waa tilmaame muhiim ah. Waxaa adeegsada noocyo kala duwan oo hay'ado ah si ay isbarbar dhigaan codsadayaasha ku saleysan u -qalmitaanka amaahda.
Waxaad hubsan kartaa in wadartaada ay tixgeliyeen amaahiyeyaasha, shirkadaha caymiska, milkiileyaasha guryaha, iyo shaqaaleysiinta.
Waxay saameysaa dhinacyo badan oo nolosha ah, sidaa darteed meel sare oo ka tirsan miisaanka FICO waxay furaysaa albaabo badan.
Sida Dhibcuhu u shaqeeyaan
Sida VantageScore, habraaca wuxuu ku salaysan yahay cabir laga bilaabo 300 ilaa 850. Tan waxaa loo jajabiyay dhowr qaybood, oo leh "aad u liita" iyo "cadaalad" ka hor "wanaagsan", "aad u wanaagsan" iyo "gaar ah". Sideed boqol ayaa ku filan si loo helo xaaladaha iyo adeegyada ugu fiican. Qiimayntu waxay ku salaysan tahay warbixinnada ay soo ururiyeen xafiisyada dalka oo dhan.
Sida laga soo xigtay xafiiska Khubarada, ku dhawaad ​​17% muwaadiniinta Mareykanka ayaa ku jira qeybta. Macaamiishaani waa inay hagaajiyaan booskooda si ay lacag u kaydsadaan oo ay noqdaan kuwo lagu aamini karo indhaha hay'adaha. Tan waxaa lagu gaari karaa hagaajinta ama dib -u -dhiska dhibcaha, iyadoo ku xiran sax ahaanshaha warbixinnada.
Dayactirku wuxuu ku salaysan yahay khilaafyo rasmi ah si meesha looga saaro macluumaadka waxyeelada leh ee beenta ah. Fiiri kii ugu dambeeyay dib u eegista credit credit.com on Credit Fixed si aad u aragto sida tani u shaqayso. Dib -u -dhiska waxaa loola jeedaa in lala shaqeeyo qaybaha kala duwan ee qiimeynta FICO, sida baaxadda deynta guud. Istaraatiijiyadu waxay ku xiran tahay hadafyada - tusaale ahaan, waxaad u baahan kartaa mid sare dhibcaha dhibcaha si aad u iibsato baabuur.
Codsadayaasha ka socda qaybta "cadaalad" waxaa lagu eegaa shaki. Heerku wuxuu saameeyaa xaaladaha iyo helitaanka adeegyada amaahda, ha ahaato deyn baabuur, amaah guri, ama kaarka deynta. Heerkaaga hoose ee kala sarreynta - waxaa sare u kacaya dulsaarka. Haddii aad oggolaansho hesho, amaahdu way ka qaalisan tahay qof sare.
Faa'iidooyinka Dhibcaha Wanaagsan
Kicinta nidaamka ayaa muhiim u ah mustaqbalkaaga dhaqaale. Hagaajinta ayaa soo jiidata malaayiin qof. Waa kuwan qaar ka mid ah faa'iidooyinka.
Heerarka dulsaarka ee noocyada kala duwan ee adeegyadu way yaraan doonaan, taas oo macnaheedu yahay in amaahdu ay jaban tahay.
Iyada oo sicirrada hoose ay yimaadaan lacag -bixinno hoose. Buuxinta waajibaadka bil kasta way fududaan doontaa.
Waxaad ku furi doontaa xaalado ka wanaagsan kaararka, oo ay ku jiraan dulsaar eber, heshiisyo, iyo abaalmarinno.
Ijaaridda guri ama guri way sahlanaan doontaa, maadaama mulkiilayaashu kuu arki doonaan inaad tahay kirayste ka masuul ah.
Sababta Dhibcuhu u dhacaan
Maadaama wadarta guud ay ku salaysan tahay warbixinta, maxaa si dhab ah u saameeya? Habka FICO wuxuu tixgeliyaa shan dhinac oo ka mid ah habdhaqankaaga amaahda. Mid kasta oo iyaga ka mid ahi saamayn gaar ah ayuu ku leeyahay xaaladdaada. Waa tan burburka:
lacagihii hore (35%);
lacagta guud ee lagu leeyahay (30%);
da'da diiwaanada (15%);
akoonno cusub (10%);
isku darka amaahda (10%).
Ogsoonow in hababka qiimeynta ee kala duwan ay ku tiirsan yihiin qaybo kala duwan, inkasta oo FICO iyo VantageScore ay aad isugu dhow yihiin. Inta badan, wadarta guud ee aan fiicnayn ayaa la arkay iyada oo ay sabab u tahay miisaaniyad -xumada. Tusaale ahaan:
Waxaa laga yaabaa inaad hore u seegtay lacag -bixinnada. Tani waa nooca macluumaadka ee ugu waxyeellada badan, maadaama ay qeexayso qaybta ugu weyn ee dhibcaha. Sida caadiga ah, dayn -bixiyeyaashu waxay soo sheegaan lacag -bixinta dambe 30 maalmood ka dib taariikhda.
Ugu dambayntii, ku guuldaraysiga bixinta natiijooyinka uruurinta, tafaasiisha, musalafnimada, iyo xukunnada madaniga ah, kuwaas oo sumcadda ka dhigaya wadarta muddo 7 sano ah (Cutubka 7 -aad ee kicitaankoodu 10 sano ayuu sii raagayaa).
Waxaa laga yaabaa inaad isticmaashay xad aad u badan. Kordhinta kaararka deynta waa fikrad aad u xun, maadaama ay keeneyso saamiga isticmaalka 100%. Dhanka kale, khubaradu waxay ku talinayaan in la isticmaalo wax aan ka badnayn 10% xadkaaga guud.
Haddii aad waayo -aragnimo yar u leedahay amaahda, taariikhdaadu aad bay u gaaban tahay.
Amaahiyayaasha isticmaala kaliya hal ama laba nooc oo adeegyo ah ayaa leh isku -darka dhibcaha oo liita. Qodobkan, oo mas'uul ka ah 10% natiijada, wuxuu ka tarjumayaa kartidaada aad ku maareyn karto noocyada kala duwan ee waajibaadka.
Waxaa laga yaabaa inaad heshay deyn aad u badan.
Waxaa laga yaabaa inaad ku soo gudbisay codsiyo aad u badan muddo gaaban gudaheed. Dukaamaysiga qiimaha waa la oggol yahay, laakiin codsashada amaahda noocyada kala duwan waxay leedahay saamayn taban, maadaama ay kaa dhigayso qof u baahan lacag caddaan ah.
Sideen U Hagaajin Karaa Dhibcahayga Deynta?
Haddii dhibcahaagu si aan caddaalad ahayn u dhacay, hagaaji khaladaadka warbixinta ama shaqaalee khubaro. Dayactirku wuxuu ku salaysan yahay qodobbada Xeerka Warbixinta Xisaabta Caddaaladda, kaas oo ku waajibinaya xafiisyada inay ka saaraan wixii macluumaad ah oo aysan xaqiijin karin. Si aad u furato muran, waxaad u baahan tahay inaad hesho caddayn oo aad nuqulo ka samaysato dukumiintiyada si aad u taageerto sheegashadaada. A template waxaa laga heli karaa mareegaha Xafiiska Ilaalinta Maaliyadeed ee Macmiilka.
Haddii kale, ka hel shirkad dayactir gobolkaaga. Xirfadlayaashu waxay ka heli doonaan is -waafajin ku jira diiwaankaaga, waxay diyaarin doonaan caddayn waxayna ku doodi doonaan si rasmi ah iyagoo ku matalaya. Tani waxay badbaadineysaa waqti, maadaama aadan u baahnayn inaad ku socoto xeerarka ama aad wax ka qabato waraaqaha rasmiga ah. Warqad kasta oo khilaaf ah waxay bilaabaysaa baaritaan gudaha ah oo soconaya 30 maalmood. Haddii xafiisku aqbalo isbeddelada, waxaad ku heli doontaa koobiga warbixinta la beddelay oo lacag la'aan ah.
Marka dhibcaha caddaaladdu sax yihiin, ma jiraan wax la hagaajin karo. Taa bedelkeeda, fiiri qaababka amaahda si aad u aragto qaybaha FICO ee hoos u dhiga wadarta. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad hoos u dhigto adeegsiga adiga oo bixinaya dheelitirka qaar, ballaarinaya xadka, qaadashada kaarka cusub, ama noqoshada isticmaale idman. Si tartiib -tartiib ah, heerkaaga ayaa soo hagaagaya, oo furaya xaalado ka wanaagsan noocyada kala duwan ee adeegyada.